Indlu yeholide ethandekayo ngenene enombono wolwandle - I-Airbnb
Indlu yeholide ethandekayo ngenene enombono wolwandle
Indlu yethu endala yeholide ibekwe kumbindi weBuckow. Ibekwe kwesinye sezona zitrato zintle edolophini, iindwendwe zethu zijonge amachibi amabini kumacala omabini endlu (abizwa ngokuba yiSchermützelsee kunye neBuckowsee). IBuckow yidolophu ethandeka kakhulu kwaye ezolileyo! Ukuphumla kuqinisekisiwe. Uyakonwabela umoya omtsha welizwe kunye neenkuni ezijikeleze idolophu, ezilungele ukuhamba ixesha elide ukujikeleza ichibi, ukubaleka, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile okanye ukuhamba ngeenyawo.
Indlu endala inika amagumbi amancinci amaninzi kunye neendawo ngaphakathi kwindlu okanye egadini, apho izibini okanye amaqela amancinci kunye neentsapho kunye namaqela amakhulu aya kuhlala efumana indawo yangasese yokufunda nokuphumla. Nangona indlu ibanzi, izibini okanye amaqela abantu ababini okanye abathathu baya kuziva bekhululekile kwaye bekhululekile endlwini.
Uya kufumana ezininzi iikona zokufunda, apho unokuphumla ngencwadi elungileyo. Kwaye ukuba kufuneka ugqibe iprojekthi okanye usebenze kancinci: akukho ngxaki konke konke! Iofisi yethu ibonelela ngendawo ezolileyo apho unokuvala zombini iingcango kwaye usebenze kude.
Elinye lamagumbi okuhlala amabini kumgangatho ophambili libonelela ngepiyano entle, eyenziwe ngomthi kunye negitare, ii-bongos kunye nezixhobo ze-percussion. Ezi zixhobo zilindele ukuba udlale iingoma ezimbalwa okanye ucule kunye. (Yiza namaphepha omculo ukuba ufuna ukudlala into ekhethekileyo!).
Ikhitshi kunye namagumbi okuhlambela omabini axhotyiswe NGOKUPHELELEYO. Hlamba zonke izixhobo zakho zemidlalo kunye nayo yonke enye into kumatshini wethu wokuhlamba ophakamileyo. Kukho indawo yokuhlamba izitya ekhitshini, eluncedo olukhulu ukuba nihamba ngamaqela amakhulu okanye njengosapho. Kananjalo, le ndlu ibonelela ngesitovu segesi esikhulu esongezelelekileyo kunye nefriji ephangaleleyo kunye nesikhenkcisi.
Ukuba kunokwenzeka ube ngumpheki onomdla: eli likhitshi lakho. Inika imithwalo yeembiza kunye neepani kunye nazo zonke iintlobo zeempahla zokupheka kunye nokubhaka. Kukho neencwadi ezimbalwa zokupheka ekhitshini (Ottolenghi, Jamie Oliver, njalo njalo). I-oveni inkulu ngokwenene kwaye ivenkile enkulu edolophini ibonelela ngazo zonke izithako zokupheka kunye nokubhaka kwisonka esitsha okanye i-roast ethandekayo yangeCawe.
Ithafa elisemva kwendlu limema iindwendwe zethu ngeentsuku ezishushu zasehlotyeni zesidlo sakusasa esinde egadini. Itafile yeplanga kunye nezitulo ezisibhozo zinika indawo engapheliyo yokutya kwasekuseni, iibrunch ezinde okanye iibarbecues ezinkulu.
Iloggia encinane phambi kwendlu (ekufuphi nomnyango wethu wangaphambili) igqunywe ngophahla oluncinane. Ehlotyeni, le ndawo inika isithunzi. Kwaye ngeentsuku zemvula okanye ebusika, le kona incinci phambi kwendlu yindawo efanelekileyo yokufunda inoveli yolwaphulo-mthetho ephefumlayo okanye ukwabelana ngeqhekeza elimnandi lekhekhe laseJamani elisuka kwindawo yokubhaka edolophini kunye nabathandekayo bakho! (Indawo yokubhaka ibhaka isonka esitsha, iiroli zesonka kunye nazo zonke iintlobo zekhekhe yonke imihla!).
Iloggia yethu ibonelela ngombono omangalisayo wechibi leSchermützel kuzo zonke iinguqu zayo ezahlukeneyo kunye nombala ophefumlayo. Nangona indlu yethu ingekho ngokuthe ngqo echibini, kodwa uya kuba nombono othandekayo ukusuka apha kunjalo!
Abalandeli bazo zonke iintlobo zemidlalo baya kufuneka bathathe isigqibo malunga noluhlu olupheleleyo lwemisebenzi yangaphandle.
Ukuba uzise ibhayisekile, unokuyisa ngqo emahlathini okanye kwiidolophu ezintle ezinjengeNeuhardenberg, Waldsieversdorf, Seelow, njalo njalo.) IiJoggers ziya kufikelela kwihlathi ngeBertolt-Brecht-Strasse ngaphakathi kwemizuzu emithathu ephezulu. Iinkuni zilungile ekuhambeni kwe-nordic okanye uhambo olude olupholileyo olujikeleze ichibi. Ngexesha lasehlotyeni uya kufumana amachibi amathathu (!) ngqo eBuckow apho ungaya khona ukuze uqubhe okanye uqashe isikhephe esincinci uye kuloba. Amachibi angaphezulu njenge "Klobichsee" nawo asondele kakhulu kwaye angafikelelwa ngebhayisekile okanye ngemoto kwimizuzu embalwa eyongezelelweyo.
Oku kubalulekile kuthi:
Kuba mna noBrian sinamava kwiiflethi ezininzi ze-AIRBnB OONA MANGALISAYO ububele obuvela kubabuki zindwendwe abaninzi kwihlabathi jikelele, sifune ukwabelana nawe ngala mava.
Yiyo loo nto singacoci ZONKE izinto zethu phambi kokuba ufike. Uya kuba nokufikelela ngokupheleleyo kuzo zonke izixhobo zethu, iincwadi, iTV, iirekhodi zethu kunye nomdlali werekhodi, iofisi yethu, ikhitshi lethu kunye nazo zonke izinto zokudlala zabantwana. Ingca yethu egadini ibonelela ngeendawo ezininzi zeepikiniki, ukonwabela iipistoli zamanzi kwaye kukho netrampolin enkulu ngasemva kwegadi! Kubantwana abancinci sinika umgodi omncinci wesanti, ujingi kunye nedama elincinci (lomoya).
Wir sind Brian und Melanie, ein deutsch-irisches Ehepaar, das mit drei Kindern ( im Alter von 2-13 Jahren) in Berlin lebt.
Wir arbeiten in den Medien und lieben es, in unserem Haus auf dem Land nach einer wilden Woche immer wieder so richtig auszuspannen.
Wir sind in vielen AirBnB-Wohnungen, die wir selbst über die Jahre weltweit angemietet haben, oft unglaublich persönlich empfangen worden. Deshalb möchten wir dieses Erlebnis auch unbedingt in genau dieser Form zurückgeben.
Wir wünschen uns, dass unsere Gäste sich wohl fühlen und ALLES vorfinden, was Sie für einen wunderbar erholsamen Aufenthalt in unserem Häuschen in Buckow benötigen.
Wir arbeiten in den Medien und lieben es, in u…
Uya kuba ziindwendwe kuphela endlwini ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Buckow (Märkische Schweiz)